Kooxda Ismiidaaminta waxay leedahay boodhadh cusub oo leh Joker iyo Harley Quinn | Abuurista khadka tooska ah
Boorarka cusub ee kooxda ismiidaaminta ah ee "muuqaal" kale siiya Joker, Harley Quinn iyo inbadan
Kooxda Ismiidaaminta, ama Ismiidaaminta Mareykanka, waa filim Mareykan ah oo superhero ah iyada oo ku saleysan kooxda DC Comics antihero. Filim yeelan doona waxyaabo gaar ah marka loo eego mid kale, sida inaad dib u aragto Jared Leto oo mar kale doorka jilaa ah oo jili doona Joker, iyo Margot Robbie cajaa'ib leh sida basbaaska leh ee Harley Quinn.
Shaley baayac mushtarka cusub ee kooxda ismiidaaminta ayaa bilaabay in lasoo bandhigo iyo waxaan horey uheysanay boodhadhka filimada cusub taas waa la iibsan karaa in lagu haysto qolkaaga ama meelkasta oo aad rabto antiheroes-ka sida gaarka ah taasna waxay noo horseedi doontaa filim duurjoog ah. Harley Quinn, Joker iyo Deadshot waxay leeyihiin boodhadh u gaar ah.
Kooxda Ismiidaaminta ah waxay na dhex dhigeysaa sheeko aan horay isu dhex galnay dhimashada la filayo superman Gacanta maalinta doomaha bahalka ah, amar bixinta jidadka ayaa baaba'da iyo kormeerayaasha ugu halista badan adduunka ayaa howl ku jira. Waa dowlada lafteeda oo iyadu siisa fursad ay iskaga furaan howlgalka ismiidaaminta ah kaas oo ah midka aan ogaan doonno markaan tagno shineemada oo ah kulankeedi ugu horeeyay Ogosto 2016.
Waxaa jira rabitaan ah in la ogaado sidee u furi doonaa Jared Leto doorkiisa Joker, tan iyo markii laga soo qaaday sawiradii ugu horreeyay ee aan la kulannay, midka fiirinaya kamaradda oo waji runti waalan leh, wuxuu ku guuleystay inuu sare u qaado rajooyinka ku filan. Doorkiisa Dallas Buyers Club sidoo kale wuxuu helay dib u eegis aad u wanaagsan, marka aragtida isaga oo ay weheliso Margot Robbie, oo si aad u wanaagsan loo garanayo, waa in ka badan sababo ku filan oo lagu sugo horyaalkeeda xagaagan.
Filim aan sidoo kale ku arki doono Will Smith ayaa guntaday Deadshot iyo in saameynta Harley Quinn ay naga dhigtay inaan markale aragno atariishada filimkeeda oo ku saabsan dabeecaddan gaarka ah ee dumarka.
Dhinaca kale, dhinaca superhero, ha lumin fursadda inaad arag iyaga oo da 'ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Boorarka cusub ee kooxda ismiidaaminta ah ee "muuqaal" kale siiya Joker, Harley Quinn iyo inbadan
Maanta Marilyn Monroe waxay noqon doontaa 90 sano jir: taxanaha madow, sawirkeedii ugu fiicnaa ee ugu fiicnaa